छिटो-छिटो पिसाब लाग्नु प्रोस्टेटको समस्या हुन सक्छ, यस्ता छन् लक्षण र उपचार
जेठ १८, २०७४ बिहिवार ०६:५९:०० प्रकाशित
'प्रोस्टेट' एउटा पुरुष ग्रन्थी हो, जसले वीर्यको केही भाग उत्पादन गर्छछ। यो ग्रन्थीको नियमित विकासबिना सन्तान उत्पादन गर्न पुरुष सहयोगी बन्न सक्दैन। त्यसैले प्रोस्टेट ग्रन्थीको महत्व छ। २० प्रतिशत पुरुषमा ४० वर्ष पुगेपछि प्रोस्टेट ग्रन्थी कोशिकाको अतिवृद्धि (हाइपरप्लेजिया) देखा पर्छ। कोशिकाको अतिवृद्धि ६० को उमेरमा ६० प्रतिशत र ७०-८० को उमेरमा ९० प्रतिशत पुग्ने गर्छ। ८० वर्ष नाघेका पुरुषमा सधैँ प्रोस्टेट ग्रन्थी कोशिकाको अतिवृद्धि देखा पर्छ। तर, सबै पुरुषले प्रोस्टेट ग्रन्थी कोशिकाको अतिवृद्धि हुँदैमा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उपचारको आवाश्यकता ग्रन्थी वृद्धिले मुत्र लक्षण देखाउन थालेपछि मात्र गराउनुपर्ने हुन्छ।
प्रोस्टेट के हो?
फलस्वरुप मुत्रथैलीको मांसपेशी मोटो र औधी संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले थोरै पिसाब भएको अवस्थामा पनि थैली खुम्चिन्छ र बारबार पिसाव फेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्ततोगत्वा मुत्रथैली कमजोर भएर जान्छ र पिसाब निखार्न सक्ने क्षमता गुम्छ। त्यसैले पिसाब फेरेर अल्ट्रासाउन्ड गर्दा थैलीमा पिसाव बाँकी रहेको देखा पर्छ। मुत्रनलीको सुरुको भाग साँघुरिनु र मुत्रथैलीमा निखार्न नसकेको पिसाव रहनुले प्रस्टेट ग्रन्थी मांसपेशी कोशिकाको अतिवृद्धिका लक्षण देखा पर्छन्। तर, पुरुषहरु सधैँ प्रोस्टेटले समस्या गरेको छ भन्ने महसुस गर्दैनन्। यस्ता पुरुषले एलर्जीको वा रुघाखोकीमा प्रयोग हुने औषधि सेवन गर्दा, लामो समय पिसाव रोक्दा, रक्सी सेवन गर्दा, चिसोमा बस्दा वा धेरै दिन दिसा नगर्दा एक्कासी पिसाब रोकिएपछि ग्रन्थीको समस्या रहेको चाल पाउँछन्।
मुत्र प्रणालीमा देखापर्ने लक्षण दुई प्रकारका हुन्छन्
१. उत्तेजनात्मक लक्षणः छिटोछिटो पिसाव फेरिरहनुपर्ने, पिसाब लागेपछि रोक्नै गाह्रो पर्ने, राति पिसाब फेर्न उठिरहनुपर्ने, पिसाब फेर्दा पोल्ने-जलन हुने र दुख्ने तथा पिसाबको मात्रा थोरै हुने। यसप्रकारका लक्षण बिरामीलाई बढी पिरोल्ने तथा क्रुद्ध पार्ने वा अप्ठेरो महसुर गराउने हुन्छन्।
२. अवरोधजन्य लक्षणः पिसाब लागेर फेर्न जाँद पनि केहीबेर कुरेपछि मात्र आउने, पिसाब फेर्न कुर्नुपर्ने, पिसाबको धारा कमजोर तथा मसिनो हुने, पिसाब निखार्न लामो समय लाग्ने, पूरै पिसाब ननिख्रने र पिसावको थैली तन्केर कमजोर भएको अवस्थामा सुतेको बेला वा अरु समय पनि पिसाव अनियमित हुने।
रोग निदानमा उमेरको ठूलो भूमिका रहन्छ। तर, प्रोस्टेट ग्रन्थी मां‌सपेशी अतिवृद्धि भएर देखिने मुत्र लक्षण वृद्ध अवस्थामा मात्र हुन्छ भन्ने भ्रम राख्नु हुँदैन। ज्यादै ठूलो भएको प्रोस्टेट ग्रन्थीले मात्र मुत्र लक्षण प्रकट गर्छ भनेर पनि सोच्नु हुन्न। केही पुरुषमा निकै ठूलो प्रोस्टेट ग्रन्थीले पनि नराम्रो असर पारेको हुँदैन भने कसैलाई सानो ग्रन्थीले पनि मुत्र प्रणालीमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ।
रोग निदानको उद्देश्य पिसाबमा देखा परेका लक्षण प्रोस्टेट क्यान्सर, मूत्राशयको क्यान्सर, मुत्रथैलीको पत्थरी वा मुत्र संक्रमण जस्ता रोगसँग संलग्न छ कि छैन भनेर यकिन गर्नु हो। किनकि प्रोस्टेट ग्रन्थी मांसपेशी कोशिकाको अतिवृद्धिबाट उत्पन्न रोग जीवनभर रहिरहने अवस्था हुन्छ। यो रोग बढ्दै जाने भए पनि बिरामी र चिकित्सकको प्रयासले यससँग जुध्न सकिन्छ। बिरामीमा प्रोस्टेट ग्रन्थी वा मुत्रथैलीको क्यान्सर रोग देखा परे त्यस्को निदान र उपचार सामान्यतया पुरुषको उमेर र अरु शरीरमा भएका जीर्ण रोगलाई ध्यानमा राखेर आक्रामक तरिकाबाट हुनुपर्छ।
रोग निदानले निम्न कुरा थाहा पाउनु सकिन्छ
फेरिसकेपछि थैलीमा कति पिसाब बाँकी रहन्छ?
ग्रन्थी तथा पिसाबमा संक्रमण छ कि?
भएको लवण र संक्रमणको कारणले मुत्रथैलीमा पत्थरी जमेको छ कि?
थैलीबाट मुत्र बाहिनी नली हुँदै पिसाब मिर्गौलातर्फ बगी संक्रमण र मुत्र उच्च चापले गर्दा मिर्गौलाको कार्यक्षमता ह्रास हुने वातावरण बनेको छ कि?
मुत्र बाहिनी नली र मिर्गौला फुलेका छन्?
ग्रन्थीले संलग्न अवरोधका कारण मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ भने त्यसको मात्रा कति छ? आदि।
५० वर्ष नाघेका बिरामीमा रगतमा 'पिएसए' भन्ने जाँच पनि गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पिसावको धारा सानो हुने वा कनेर पिसाव फेर्नेलाई पिसाबको वेगको ग्राफका रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पिसाबमा रगत जाने बिरामीको मुत्रथैलीभित्र दुरविनले जाँचेर हेर्नुपर्छ। त्यही सिलसिलामा प्रोस्टेट ग्रन्थीको आकार र त्यसले मुत्रनलीलाई कत्तिको छेकेको छ भन्ने अध्यन गरिन्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थी तथा मुत्रथैलीको संक्रमण र क्यान्सर छैन भन्ने यकिन भएपछि बिरामीलाई रोगले कत्तिको बाधा पुर्‍याएको छ त्यसको अध्यन गर्दै उपचारको खाका तयार गरिन्छ।
मुत्र प्रणालीको तल्लो भागको लक्षणबाट राहत दिनु ।
ग्रन्थी कोशिकाको अतिवृद्धिको क्रमलाई रोक्नु।
जीवन गुणात्मक तवरले उत्कृष्ट पार्न सघाउनु।
बिरामीहरु जसको दैनिक जीवनमा प्रोस्टेट ग्रन्थी वृद्धि लक्षणले खासै असर पारेको छैन तिनीहरुले सामान्यतया बिनाऔषधि सावधानी अपनाउँन सक्छन्। त्यो भनेको चिकित्सकको सक्रिय निगरानीमा रहनु हो।
तर, प्रोस्टेट ग्रन्थी लक्षणले नकारात्मक असर परेकाहरुले आफ्नो जीवनशैलीमा आंशिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। पानी तथा तरल पदार्थको सेवनमा बेलुका कमी ल्याउने, समय दिएर नहडबडाई पिसाव फेर्ने, तुरुन्तै फेरि पिसाव फेर्नु परे पनि नहिच्किचाउने र झिँझो नमान्ने, कब्जियतबाट मुक्त रहने, दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्ने, रक्सी तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने, कफी र मसलाजस्ता उत्तेजक खानाबाट टाढै बस्ने आदि।
बिरामीले सामान्य जीवनशैली हेरफेरबाट अपेक्षा गरे जति फाइदा महसुस गर्दैनन् उनीहरुले औषधि उपचारको सहयोग लिनै पर्छ। यो समस्यामा प्रायःजसो दुई थरिका औषधि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो, मुत्रथैलीको घाँटी, मुत्रनलीको सुरुको भाग र प्रोस्टेट ग्रन्थीमा रहेका मांसपेशीमा असर गरेर त्यसलाई खुकुलो पार्दै मुत्र सन्चालनलाई सजिलो पार्ने औषधि। मुत्र सञ्चालनको अवरोध घटाउने औषधिले बिरामीको रक्त सञ्चारमा गिरावट ल्याएर एक्कासी रिङ्गटा लाग्ने हुन सक्छ।
दोस्रो प्रकारका औषधिले प्रोस्टेट ग्रन्थी कोशिकाको वृद्धिलाई रोक्छन्। यी औषधिको 'साइड इफेक्ट'मा यौन दुर्वलता गराउनु, वीर्यको मात्रा घटाउनु, स्तनको वृद्‍धि गर्नु आदि पर्छन्।
जसलाई प्रोस्टेट ग्रन्थीको वृद्धि अथवा खुम्चिएका कारण मुत्रथैलीको मांसपेशीमा परेको असरले गर्दा छिटोछिटो पिसाव फेर्ने, पिसाव लागेपछि रोक्नै नसक्ने हुन्छ वा पिसाव चुहिने अवस्था आउँछ, तीनहरुले अर्को एक प्रकारको औषधि पनि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी औषधिले मुत्रथैलीको मांसपेशी खुम्च्याउन कम गरी मुत्र सञ्चय गर्ने क्षमता वृद्धि गर्छन्। यस्ता औषधिको प्रतिकुल असर भनेको मुख सुक्ने, प्यास बढी लाग्ने आदि हो।
औषधि उपचारबाट सन्तोषप्रद फाइदा नपाउने बिरामीले शल्य उपचारको विधि अपनाउनुपर्छ। खास गरेर निम्न बिरामीमा शल्य उपचार अनिवार्य हुन्छः
थैलीमा पत्थरी भएका।
ग्रन्थीको बीचको भाग मुत्रथैलीभित्र एक सेन्टिमिटर वा बढी घुसेमा।
थैलीले थुप्रै पिसाव निखार्न नसकेको अवस्थामा।
संक्रमण बारम्बार दोहरिएमा।
रगत देखा परेमा।
वृद्धिसँगै हर्निया पनि भएमा।
रामीको पिसाव पूरै बन्द भएमा।
सुतेको बेला थाहा नपाउने गरी पिसाव चुहिने भएमा।
मिर्गौला तथा मुत्र बाहिनीनली फुले तथा मिर्गौलाको कार्यक्षमता ह्रास भएमा।
शल्य उपचारपछि मुत्र अवरोध गर्ने प्रोस्टेट ग्रन्थीको भागलाई निकालेर मुत्र सञ्चालन सुचारु पार्न सकिन्छ। प्रविधिक विकासले गर्दा शल्यउपचार पछि लामो समयसम्म मुत्रथैलीका नली राख्नु नपर्ने र केही दिनमै अस्पतालबाट घर जान मिल्ने भएकाले प्रोस्टेट शल्य उपचार निकै लोकप्रिय र प्रचलित छ। शल्य तरिकाबाट निकालिएको तन्तुमा प्रोस्टेट क्यान्सर भए/नभएको जाँच्न मिल्ने यो उपचार विधिको अर्को विशेषता हो। यो उपचार विधिले यौन दुर्वलता ल्याउँदैन तर शल्यक्रियापछि वीर्य स्खलन प्रायः नहुने भएकाले यसबारे यौनक्रीडामा संलग्न पुरुषले जानकारी राख्नु अनिवार्य हुन्छ। शल्यक्रियापछि खुलेर मोटो धारा पिसाव गर्ने बिरामीको केही समयमा पिसावको धारा मसिनो हुँदै जाने र लामो समय लगाएर पिसाव फेर्नुपर्ने भयो भने थप जटिलता उत्पन्न भयो कि भनेर जँचाउनुपर्छ।
(डा. भट्ट मेडिकेयर नेसनल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा कार्यरत छन्)
मिर्गौला फेल हुने कारण, लक्षण र उपचार
पाठेघरबाहिर बच्चा बस्ने कारण, लक्षण र उपचार